အမေက “မှီခို” တဲ့လား! ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Author: lu bo | 8:25 PM | No မှတ်ချက် | စာဖတ်ကြရအောင်
အမေက “မှီခို” တဲ့လား! အဲ့လိုထင်ရင် ဒီစာကို ဆုံးအောင်ဖတ်လိုက်… ဟားဟား အကြီးကြီးရယ်လိုက်ချင်တယ်။ ဘယ်လိုဉာဏ်ကြီးရှင်ကများ
အိမ်ထောင်စုဇယားထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ အမေတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်ကို “မှီခို” ဆိုပြီး ဖြည့်ဖို့ ထွင်ခဲ့တာပါလိမ့်။ တကယ့်တကယ်တော့ အမေဆိုသည်မှာ…
အမေသည် Doctor (ဆရာဝန်) တော်ရုံနေမကောင်းတာလောက်ကတော့ အမေရှိနေရင် ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိနေသလိုပါပဲ။ ဆေးခန်းသွားဖို့ မလိုပါဘူး။ အမေ့ဆီမှာ ဗမာဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေး၊ တိုင်းရင်းဆေး အစုံရှိပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ဝေဒနာသာပြောပြလိုက်၊ အမေက သူ့မှာရှိတဲ့ဆေးနဲ့ ကုပါလိမ့်မယ်။ နေမကောင်းတဲ့အခါ အမေက ဆရာဝန်အဖြစ်သာ မကဘူး။ special nurse အဖြစ်လည်း ၂၄ နာရီ ကိုယ့်ဘေးမှာ အသင့်ရှိနေတတ်ပါတယ်။ လိုလေသေးမရှိ ပြုစုပေးပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ အမေက ကျွန်တော်တို့ ဟိုးငယ်စဉ် ကလေးဘဝကတည်းက စကားစပြောတတ်ဖို့၊
လမ်းစလျှောက်တတ်ဖို့၊ စားတတ်၊ သောက်တတ်ဖို့၊ ဘာသာတရားကို ကိုင်းရှိုင်းတတ်ဖို့ ပထမဆုံးသင်ပေးခဲ့တဲ့ လက်ဦးဆရာပါ။ အကောင်းနဲ့ အဆိုးကို ခွဲခြားတတ်ဖို့၊ လူပီသဖို့၊ စည်းကမ်းရှိဖို့ လမ်းညွှန်ပြသပေးခဲ့သူကလည်း အမေပါပဲ။ ကကြီး၊ ခခွေး၊ အေ၊ ဘီ၊ စီ၊ ဒီ ကို စသင်ပေးခဲ့တာလည်း အမေပါပဲ။
အမေသည် arbiter (စီရင်ဆုံးဖြတ်ပေးသူ) အိမ်မှာ ကိစ္စကြီးငယ် တစ်ခုခုဆို အမေပါမှ ရပါတယ်။ အမေ့ကို အားလုံးက တိုင်ပင်ရပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုခုဆို အမေကြားဝင်ဖြေရှင်းပေးမှ အဆင်ပြေတတ်ပါတယ်။ မိသားစုအတွင်းရေး ပြဿနာဆိုလည်း အမေကပဲ ဒိုင်ခံဖြေရှင်းလေ့ရှိပါတယ်။ အမေ ဆုံးဖြတ်တာကို အားလုံးက နာခံကြပါတယ်။ ပြဿနာကြီးကြီးငယ်ငယ် အမေကိုယ်တိုင်ဝင်ပါမှ၊ အမေ့ကိုတိုင်ပင်မှ၊ အမေ့ဆီက အကြံဉာဏ်နဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကိုယူမှ အောင်မြင်ပြီးမြောက်လေ့ရှိပါတယ်။
ကဲ အမေတစ်ယောက်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေထဲမှာ ဒါအကုန်မဟုတ်သေးဘူး။ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ ဒါတောင် ဒီလောက်လုပ်နေရတဲ့ အမေက အိမ်ထောင်စုဇယားထဲမှာ မှီခိုတဲ့လား။ မတရားလိုက်တာ။ အမေတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ အိမ်ထောင်စုဇယားက အမေ့အလုပ်အကိုင်နေရာမှာ “မှီခို” ဆိုတာထက် ပိုပြီး
ထိုက်တန်တဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးလောက် ဝိုင်းစဉ်းစားကြရင် မကောင်းပေဘူးလား။